Ukutya kwePet Bowl Abavelisi kunye nabaXhasi | Umzimveliso weChina Pet Bowl
Inja ephathekayo Ibhotile yokusela
Inqaku lale isitya senja senziwe ngentsimbi ephindwe kabini siyasuswa, izitya zentsimbi ezinganyangekiyo kwizitya zentsimbi ezomeleleyo.
Isitya senja esenziwe ngentsimbi kabini sikwabandakanya isiseko serabha esinokususwa esingasuswanga ukunceda ekuqinisekiseni ukuba kutyiwe cwaka, kungachitheki ndawo.
Isitya sebhokhwe esenziwe ngeSinyithi esineSibini esinoNxweme sinokuhlanjwa sisicoci esicocekileyo, susa nje isiseko serabha.
Ilungele zombini ukutya namanzi.
Ibhotile yaManzi eVuthayo
Ibhotile yamanzi eValiweyo inja entle yokuhamba kunye nokuhamba intaba kunye nenja okanye ikati yakho .Ibhotile yamanzi enembonakalo yefashoni, isinki ebanzi ivumela isilwanyana sakho ukuba sisele amanzi lula.
Ibhotile yaManzi eValiweyo yenja yenziwe nge-ABS, ikhuselekile kwaye ihlala ixesha elide, kulula ukuyichitha kunye nokucoca. Igcina impilo kunye namandla kwizilwanyana zakho.
Ayenzelwanga izinja kuphela, kodwa nezilwanyana ezincinci ezinjengeekati kunye nemivundla.
Ibhotile yamanzi yeNja eXineneyo iyilelwe ukubamba i-450 ML yamanzi kwisilwanyana sakho emva kokukhama amanzi kwisitya, kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Bowl yenja engenasici
Izinto eziphathekayo kwisitya senja esingenasici esingenakunqotywa ngumhlwa, sinika enye indlela enempilo kwiplastiki, ayinayo ivumba.
Isitya senja esingenasici esingenasici sinesiseko seerabha. Ikhusela imigangatho kwaye ikhusela izitya ekutyibilikeni ngelixa isilwanyana sakho sitya.
Esi sitya senja senziwe ngentsimbi engenasici sineesayizi ezi-3, ezifanelekileyo izinja, iikati, kunye nezinye izilwanyana, ilungele indawo eyomileyo yokutya, ukutya okumanzi, ukuphatha, okanye amanzi.
Kabini Stainless Bow Dog
Ukutya kweenja okungafunekiyo kunye nesitya samanzi
Ukutya kwenja kunye nesitya samanzi esinoyilo olunokwenzeka olunokululwa kwaye lusonge kude olulungele ukuhamba, ukunyuka intaba, ukukhempisha.
Ukutya kwenja okuwohlokayo kunye nesitya samanzi zizitya ezinkulu zokuhamba kwezilwanyana zasekhaya, kulula kwaye kulula ukuyiphatha ngebhaksi ekhweleyo.so inokudityaniswa nebhendi yebhanti, ubhaka, ilokhwe okanye ezinye iindawo.
Ukutya kwenja kunye nesitya samanzi kunokungqubeka ngobukhulu obahlukeneyo, ke kufanelekile ukuba zonke izinja ezincinci ukuya eziphakathi, iikati, kunye nezinye izilwanyana zigcine amanzi kunye nokutya xa ziphuma ngaphandle.